बालबालिकाको अण्डकोष र डिम्वासयजस्ता अंगबाट हुने क्यान्सर कस्तो हो ? लक्षण के हुन्छ ?
भदौ २६, २०७४ सोमवार १७:१२:४७ प्रकाशित
बालबालिकाको अण्डकोष र डिम्वासयजस्ता अंगबाट हुने क्यान्सर कस्तो हो ? लक्षण के हुन्छ ?- केपी
शुक्राणु (Sperm) र अण्डा (Ovum) बनाउने अण्डकोष र डिम्वासयजस्ता अंगबाट हुने क्यान्सरलाई जर्म सेल ट्युमर (जिसिटी) भनिन्छ। यो रोग वंशाणुगत हुन सक्ने भएकाले परिवारका धेरै सदस्यलाई हुन सक्छ। धेरै चिल्लो पदार्थको सेवनले ओभरीको क्यान्सर हुन सक्ने कुरा पत्ता लागेको छ। तेस्रो लिंगी व्यक्तिहरुमा पनि यो क्यान्सर बढी हुने सम्भावना हुन्छ।
अण्डकोष सुन्निने, पेट दुख्ने, तौल घट्ने, पेटमा मासु पलाउने जस्ता लक्षण यो रोगमा देखिन्छ। लक्षणका आधारमा युएसजी, सिटी स्क्यान र रगतका केही जाँचहरुले रोगको निदान हुन्छ। शल्य चिकित्साबाट ट्युमर निकाल्ने र केमोथेरापीको माध्यमबाट यो रोगको उपचार हुन्छ। सुरुवाती अवस्थामा नै रोगको उपचार भएमा पूरै निको हुने सम्भावना बढ्दछ।
विश्वव्यापी तथ्यांक अनुसार प्रत्येक वर्ष १५ वर्षमुनिका एक लाख ६० हजार बालबालिकालाई क्यान्सर हुने गर्छ। तीमध्ये ९० हजारको मृत्यु हुन्छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष एक हजार एक सयदेखि एक हजार ६ सयसम्म बच्चाहरुमा क्यान्सर रोग हुने गरेको अनुमान छ।
वयस्कहरुलाई क्यान्सर लाग्ने कारण जीवनशैली मानिए पनि बच्चाहरुमा यसको प्रभाव त्यति धेरै हुँदैन। यिनीहरुलाई क्यान्सर हुने मुख्य कारण बच्चा नजन्मदै वा शिशु अवस्थामा छँदै शरीरका कोषहरुको विभाजन हुँदा यसभित्रका डिएनएमा अस्वभाविक परिवर्तनलाई मानिन्छ। विकीरण, चुरोटको धुँवा र रसायनिक पदार्थका कारणले पनि बच्चामा क्यान्सरको शुरुवात हुन सक्छ।
-डा. गणेन्द्रभक्त राय